Akwụkwọ ndị ị ga-agụ tupu ị nwụọ › Julaị 2022
Gịnị ka mma ubé pretentious aha ka nke a? Tupu ị nwụọ, ee, naanị awa ole na ole tupu ị bulie ya, ị ga-ejide ya ndepụta ị ga-agụrịrị ma ị ga-agafe onye kacha ere Belén Esteban nke na-emechi okirikiri ọgụgụ nke ndụ gị… (ọ bụ egwuregwu, macabre na njakịrị ọbara)
Ọ bụghị maka obere ịme njakịrị banyere ntinye a n'ihi na aha bụ naanị aro ka m onye blọgụ ọzọ raara onwe ya nye ide banyere akwụkwọ. Ma enwere ọtụtụ ndepụta na ntụnyere na ịntanetị nke na-achọ n'elu ọ nweghị nhọrọ ọzọ ma ọ bụghị ịwakpo ndị na-agụ akwụkwọ na-ekwu: hey, enyi! Ị maara na ị gaghị emeri ya n'agụghị akwụkwọ 3, 5 ma ọ bụ 15?
Ya mere, ebe a anyị na-aga na m akpan akpan nnwale na oké akwụkwọ. Oke n'ihi na onye hell na-aga google: «akwụkwọ ndị a ga-agụ tupu ha anwụọ» Ọ bụrụ na ị na-adịghị anya na-enye onwe gị na ikpeazụ njem?
Ya mere enwere m olileanya na ị ga-enwe ntakịrị oge ịbịakwute m. Ọ bụrụ na ịnwere awa ole na ole tupu ị pụọ na nnọkọ ahụ, ọ ga-ewe naanị nkeji ole na ole iji tufuo ebe a.
Ma mgbe ahụ, ị ​​dinara ala n'ihe ndina gị ihu akwụkwọ ọgụgụ ndị dị mkpa. Ụfọdụ ọgụgụ na-agaghị eme ka obi sie gị ike maka eluigwe, mana nke ahụ ga-enye gị ma ọ dịkarịa ala na-enye gị mmetụta uche nke ime ihe omume ụlọ akwụkwọ gị nke ọma. Yabụ na ị ga-enwe mmasị na ihe mgbu dị ka ọgwụ na-eme ka ọ dị n'otu, tupu ị pụọ ebe a ebe niile. Ugboro abụọ tupu ikpeazụ na naanị lucidity nke ndụ ya.
Akwụkwọ ndị dị mkpa nke akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ
Ogwe aka nke obe m
Abụ m onye iberibe Paco ọnụ ala na m ga-akwado akwụkwọ m, ya mere anyị ji bịa. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya nke Hitler na-agwa anyị ihe mere ndụ ya ozugbo ọ gbapụrụ na bonka. Nwoke a na-akpọ aha ọjọọ, onye nemesi ya riri...
Ọ dịghị mgbe m dere ihe ọ bụla dị otú a na agaghịkwa ọzọ. N'ihi na nke m bụ akwụkwọ akụkọ omimi, akụkọ sayensị, akụkọ na enweghị ihe ịga nke ọma nke onye edemede dara ada. Nke na n'agbanyeghị ihe niile na-aga n'ihu na-enwe mmasị dee dị ka a dwarf (na mkpịsị aka iri, dị ka nnukwu ndị. Ọ dịghị ihe na-eme na ndị digital agụghị akwụkwọ na agile index mkpịsị aka). Ebe a na-elekọta onwe ya naanị ya n'ihu kọmputa, na-ahụ ka esi amụ ihe na nkata ma nwụọ. Ọ bụrụ na nke ahụ apụtaghị ịbụ onye edemede karịa ihe ọ bụla ọzọ, Chineke bịa kwuo ya.
Ma ọ bụrụ na akwụkwọ m agwụla ma ị cheghị na ọ bụ ihe kwesịrị ịgụ tupu ị nwụọ, ọ ga-abụ n'ihi na ị nọrọla ogologo oge n'etiti ibe ya. Ma mgbe ahụ, ị ​​ga-eche echiche ịgụgharị ya iji gbatịa oge ndụ gị n'ime nkeji ọhụrụ nke ga-abụ ebighi ebi n'etiti ibe na ibe. Mgbe ahụ ị ga-ekele m maka ịgbatị ụbọchị ikpeazụ gị. Na nke ahụ ga-abụ ihe kacha mma nyekwara 5 iberibe euro nke ndụ gị.
Emere ya? Ee, dị ka ejaculator akaghi aka m zutere ga-ekwu, ọ bụ ya. Taa ọ naghị adị m ka m ga-aga n'ihu na-ewetara gị akwụkwọ kacha mma na akụkọ ihe mere eme, ikekwe echi... Bon voyage.
Tags Akwụkwọ akụkọ ugbu a, Akwụkwọ akụkọ ifo sayensị, Akwụkwọ akụkọ ọchị, Akwụkwọ akụkọ dị egwu, Erotic akwụkwọ akụkọ, Akwụkwọ akụkọ dị adị, Fantastic akwụkwọ akụkọ, Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, Akwụkwọ akụkọ akpachi anya, Akwụkwọ akụkọ omimi, Nwa akwukwo, Akwụkwọ akụkọ nchọpụta, Akwụkwọ akụkọ egwu, Akwụkwọ akụkọ thriller